डचटाउन L डचटाउन STL.org Enc एनकोरेस्टएल र एन्कोोर Y यूट • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
एन्कोरेस्टेल र एनकोर4यथ डचटाउनमा
प्रकाशित जुलाई 12th, 2021
EncoreSTL यहाँ प्रदर्शन कलाकारहरू र रचनात्मकहरूको सामूहिक हो जुन डचटाउनमा अवस्थित छ थॉमस डन लर्निंग सेन्टर। तिनीहरू लाइभ थिएटर प्रदर्शनका साथै डिजिटल मिडिया उत्पादन र समुदायलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ उत्पादन गर्छन्।
यो गर्मी मा, EncoreSTL पेश गर्दैछ एनकोर4यथ नेतृत्व कार्यक्रम, १ arts देखि २ ages वर्ष उमेरका युवाहरूका लागि भुक्तानी गरिएको अवसरहरू प्रदर्शन कला, डिजिटल उत्पादन, र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा अनुभव लिन। EncoreSTL सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण र सल्लाहकार प्रदान गर्दछ, १,२०० डलर खर्चको अतिरिक्त। कार्यक्रमको बारेमा अधिक पढ्नुहोस् र तल कसरी भाग लिने सिक्नुहोस्।
एनकोरस्टर को हो?
एन्कोरेस्टल एक डिजिटल मिडिया र प्रत्यक्ष उत्पादन कम्पनी हो सेन्ट लुइसको दक्षिण पक्षमा आधारित। तिनीहरूको मिसन उच्च गुणवत्ताको निर्माणहरू सिर्जना गर्नु हो जब कलाको पहुँच गर्न सबैलाई पहुँच गर्न जो उनीहरूलाई अनुभव गर्न चाहन्छन्। सांस्कृतिक रूपमा सान्दर्भिक थिएटर निर्माण र युवा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट, एन्कोरेस्टएल सदस्यहरू, संरक्षकहरू र सेन्ट लुइस समुदायको जीवन समृद्ध गर्न समर्पित छ, "किनकि सबै जना एक एनकोरको योग्य छन्।" एन्कोरेस्टलका गतिविधिहरू मुख्यत: यसको थिएटर र युवा कार्यक्रमहरू वरिपरि फोकस गर्दछन्, एनकोरे नाम अन्तर्गत सञ्चालित! थिएटर ग्रुप र एनकोरे4यथ क्रमशः।
एनकोर4यथ
एफ्रेम ग्रेटेनबर्गर, एन्कोरेस्टलका संस्थापक र सीईओ, एनकोरे4यथलाई एक अभिनव र आकर्षक युवा कार्यक्रम हुनका लागि तयार गरियो। कुनै नराम्रो पृष्ठभूमिका आफैंबाट आउनुभएपछि, ग्रेटेनबर्गरले कला र थियेटरमा स्थिरता र संरचना फेला पारे। त्यो अनुभवबाट उनले साँचो र समृद्ध युवा कार्यक्रमहरूको आवश्यकता देखे।
Grettenberger र Encore4Yoth बच्चाहरूलाई "कसरी गर्ने" सिकाउन चाहन्छन् - शाब्दिक र नरम सीपहरू मार्फत। एन्कोोर Y यूटले बच्चाहरूको आवेगलाई समर्थन गर्दछ, विभिन्न सीपहरू सिकाउँछ, र भुक्तानका साथै सल्लाहकार पनि प्रदान गर्दछ।
एन्कोरेस्टल टोली सहभागीहरूलाई उनीहरूको सामर्थ्य र चासोमा भेट्न काम गर्दछ। जबकि एनकोरेस्टलले मुख्य रूपमा नाटकीय निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, उनीहरूले रूचि बच्चाहरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्छन्, उदाहरणका लागि, तिनीहरूको आफ्नै संगीत उत्पादन गर्न। एन्कोरेस्टेलले एन्कोोर Y यूटका सहभागीहरूका दर्शनहरू महसुस गर्न मद्दत गर्न संसाधन, उपकरण र सल्लाहकार प्रदान गर्दछ।
एन्कोोर Y यथन नेतृत्व एक बर्ष दौर कार्यक्रम हो जुन मौसममा निर्भर हुने अवसरहरूको साथ भिन्न हुन्छ। युवाहरूले वर्षभर स्टेज क्रू गतिविधिहरूमा भाग लिन्छन्, र नेतृत्व कार्यक्रमले गर्मीमा इमर्सिभ ड्रामा थेरापी पनि समावेश गर्दछ। कसरी भाग लिने भन्ने बारे थप जानकारीको लागि ईमेल गर्नुहोस् info@encorestl.org.
यस गर्मीमा, Encore4Youth सँग मिलेर बनेको छ एसटीएल युवा कार्यहरू धेरै सहभागीहरुलाई भुक्तान रोजगार प्रदान गर्न। युवा कर्मचारीहरूले कार्यक्रमहरू मञ्चमा प्रदर्शन गर्ने र प्रशासनिक समर्थन प्रदान गर्न मद्दत गर्छन्, यसका साथै इमर्सिभ ड्रामा थेरापी कार्यक्रममा भाग लिने जुन यस गर्मीको अन्तमा युवाहरूको नेतृत्वमा अन्तिम कलात्मक प्रस्तुतिमा टु .्गिने छ।
आगामी EncoreSTL कार्यक्रम र प्रदर्शन
एनकोर! थिएटर समूह र चक राष्ट्र चिनोकी सडकमा डिनर थिएटर ल्याउनुहोस्! जुलाई २२ मा एन्कोोरमा सामेल हुनुहोस् एम्पायर हलमा mys22०3407 क्यालिफोर्नियाको चेरोकीमा हत्या रहस्यको लागि। कल गर्नुहोस् 314१814-6808१XNUMX-XNUMX०XNUMX वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् चारको लागि तपाइँको तालिका र डिनर रिजर्भ गर्न। विभिन्न थिमको साथ अतिरिक्त कार्यक्रमहरू अगस्त 5th र अगस्ट १ on मा हुन्छ।
सेप्टेम्बरमा, Encore! थिएटर समूह प्रदर्शन गर्दछ फेड तान्या साराचो द्वारा। फेड लेखक लुसिया र चौकीदार हाबिलको कथा हो, र वर्ग र जातिका सवालहरूमा ल्याटिनक्स समुदाय र ठूलो विश्वमा पुग्दछ। एन्कोरेस्टल हाल भूमिका निर्वाह गर्दै छ र निर्देशकको लागि खोजी गर्दै फेड। यदि तपाईं प्रदर्शन गर्न वा उत्पादनमा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् info@encorestl.org। प्रदर्शन सेप्टेम्बर १th – १ th र सेप्टेम्बर २th – २th मा हुनेछ।
EncoreSTL का प्रदर्शनहरू र कार्यक्रमहरूको साथ भ्रमण गरेर अद्यावधिक रहनुहोस् EncoreSTL वेबसाइट वा तिनीहरूलाई पछ्याउँदै इन्स्टाग्राम, फेसबुकवा twitter। तपाइँ यहाँ आउने कार्यक्रमहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ डचटाउन क्यालेन्डर.
तल दायर गरिएको थॉमस डन लर्निंग सेन्टर. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन र थॉमस डन लर्निंग सेन्टर. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जुलाई 12th, 2021 .
डचटाउन STL.org थॉमस डन लर्निंग सेन्टर एन्कोरेस्टेल र एनकोर4यथ डचटाउनमा